Idi China FKP-601 Machine Labeling na cache Printing Label factory and suppliers |Fineco
Igwe nrụbama FKP-601 nwere akara nbipụta cache dabara adaba maka ibipụta elu na ịde aha dị larịị.Dị ka ozi nyochara, nchekwa data dakọtara na ọdịnaya kwekọrọ wee ziga ya na ngwa nbipute.N'otu oge ahụ, a na-ebipụta akara ngosi ahụ mgbe ọ natachara ntụziaka igbu nke ezitere site na usoro ntinye aha, na isi akara na-amịkọrọ ma na-ebipụta Maka akara ngosi dị mma, ihe mmetụta ihe na-achọpụta ihe mgbaàmà ahụ ma rụọ ọrụ ntinye aha.Mpempe akwụkwọ nkenke dị elu na-egosipụta ịdị mma nke ngwaahịa ma kwalite asọmpi.A na-eji ya na nkwakọ ngwaahịa, nri, ihe egwuregwu ụmụaka, kemịkalụ kwa ụbọchị, ngwa eletrọnịkị, ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
FKF601 Igwe nrụbama nwere akara nbipụta cache
FKP-601 Online Cache Print Labeling Machine nwere ọrụ ndị ọzọ iji bulie nhọrọ:
1. Enwere ike ịgbakwunye igwe mkpuchi ribbon nhọrọ na isi label, na-ebipụta oge mmepụta, ụbọchị mmepụta na ụbọchị njedebe n'otu oge.Belata usoro nkwakọ ngwaahịa, kwalite nrụpụta mmepụta nke ọma, ihe mmetụta akara pụrụ iche.
FKP-601 Online Cache Print Labeling Machine dị mma maka ngwaahịa na-achọ nnukwu mmepụta, nke nwere akara ngosi dị elu nke ± 0.1mm, ọsọ ọsọ ọsọ na ezigbo mma, ọ na-esiri ike ịhụ njehie ahụ na anya gba ọtọ.
FKP-601 Online Cache Print Labeling Machine na-ekpuchi mpaghara ihe dịka mita 2.38.
Ike (pcs/min) 15 ~ 40 (Dịka ngwaahịa nha)
Ike (W) 1020
Tinye ngwaahịa na ngwaọrụ nri → A na-ekewa ngwaahịa ndị ahụ n'otu n'otu → A na-ebufe ngwaahịa ndị ahụ site na eriri ebufe → Ihe mmetụta ngwaahịa na-achọpụta ngwaahịa → PLC na-enweta akara ngosi ngwaahịa ma ziga ya na usoro obibi akwụkwọ iji bipụta akara → PLC na-anata akara ngwaahịa wee malite ịkpọ aha → eriri ebufe na-eziga ngwaahịa ndị akpọrọ na efere nnakọta.
Nke gara aga: FKP-801 Igwe eji akpọ aha Real Time Label
Osote: Igwe nbipụta na akụkụ dị adị
igwe na-edobe akpa na-ebipụta akwụkwọ
Igwe na-ebipụta akara ngosi cache
igwe na-edobe katọn nwere mbipụta akwụkwọ
igwe npịaji igbe na-ebipụta akara
igwe na-ede akwụkwọ nwere akara mbipụta
Inweta ozi nchekwa data na igwe eji akara akara
akara nbipute na labeling label
igwe na-ebi akwụkwọ na akara